MarketerHire: Ebee ighachi onye na-ere ahia efu? Martech Zone
Afọ a abụwo ihe ịma aka nye ọtụtụ òtù. N'agbanyeghi na obu ihe omuma, uzo ato m na acho bu:
Digital Mgbanwe - ilebara anya na ahụmịhe ndị ahịa na mpụga agbanweela na akpaaka na ntinye na nnukwu ụlọ ọrụ ka ha na-ebelata ndị ọrụ na mmefu.
Remote Otu - n'ihi ngbanwe a na-arụ ọrụ n'ụlọ n'oge ọrịa a na-efe efe, ụlọ ọrụ agbanweela echiche ha na-arụ ọrụ site n'ụlọ wee mepee maka imekọ ihe ọnụ.
Ndị ọrụ ngo na-enweghị akwụkwọ - nnukwu ụlọ ọrụ na-amụba ndị ọrụ ha oge niile na nkwekọrịta na ndị ọkachamara n'ahịa n'ahịa. Site “CMO maka iku” ruo na graphic emepụta ors ngo na-aghọ akụkụ dị mkpa nke ọ bụla ụlọ ọrụ.
Ebee ichota ndi no na ahia ahia
Ọ bụ ezie na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke saịtị ịntanetị iji chọta talent, enwere ihe ole na ole na-enyere aka ma na-enyocha ma na-ejikwa talent ị na-eme. Ọzọkwa, ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ ndị ahụ chọrọ ka ndị mmadụ na-ezuru ha ma na-ewepụta oge na oge ịkwụsị ụgwọ n'agbanyeghị nnukwu ọdịda dara.
Ahịa ahịa bụ ọrụ maka ị nweta ego tupu e nye gị onyinye ka nzukọ gị wee gbakwunye onye ahịa gị pụtara na ihe na-erughị otu izu! Ha na-enye ụgwọ ọrụ ego dị ala, enweghị ụgwọ mmechi, ma nwee ọdịda ọdịda dị ala dị ala iji na-ewe ego kwa elekere, nkera oge, ma ọ bụ nke oge niile.
Olee otú MarketerHire Vets Ahịa
MarketerHire nwere usoro nyocha nke freelancer siri ike ma bụrụkwa ndị na - ere ahịa n'onwe ha - yabụ ha na - achọ ndị ọkachamara egosipụtara nwere oke na agụụ. Ọtụtụ narị ndị ahịa na-etinye akwụkwọ kwa ọnwa, mana Ahịa ahịa naanị otu ihe na-erughị 5%. Ha:
Mbanye Top Performers - ha na-enyocha otu Facebook, forums, na LinkedIn iji chọpụta ma nyochaa talent.
Nyochaa Omimi miri emi - ha na-enyocha ahụmịhe ọkachamara, nzaghachi ndị ahịa, na ihe atụ na-arụ ọrụ yana nyocha ọfụma.
Ajụjụ ọnụ vidiyo - iji nyochaa nkà nkwurịta okwu, iche echiche siri ike, na ọkachamara.
Ihe Nlere - mgbe anabatara ya, a na-ekenye ndị na-aga ime ule ule na ọnọdụ ụwa iji gosipụta ikike, ịdị ọcha, ọkachamara na iguzosi ike n'ezi ihe.
Na-aga n'ihu Ọmarịcha - arụmọrụ na-enyocha ndị ahịa kwa izu 2 iji hụ na ọrụ dị mma na nkwukọrịta.
You'll ga-eso onye njikwa azụmaahịa soro gị rụọ ọrụ niile. Ha ga esoro gi kwurita oru gi, nyere gi aka ichoputa ihe ichoro, ma tinye gi aka na ahia. Mgbe ụgwọ gị malitere, ha ga-elele iji jide n'aka na a na-ezute ụkpụrụ dị elu anyị.
Usoro maka Ahịa ahịa dị ngwa na enweghị nkebi:
Kọwaa ọrụ gị - Gwa MarketerHire banyere oru ngo gi. Na-achọ otu ọwa ọkachamara ma ọ bụ iji wulite otu ọwa ọtụtụ? MarketerHire ga-ahazi gị oku iji mụtakwuo banyere ọrụ gị ma nweta nghọta ka mma banyere mkpa gị.
Zute ahịa gị zuru oke - Ozugbo onye njikwa ahia gị ghọtara ọrụ gị, ha ga-enyocha netwọkụ nke ndị na-ere ahịa ịchọta egwuregwu dị egwu. Gwa ha na ichoro ahia anya ma anyi gha eweputa oge izipu ka igha ezute ha ma lelee oru a. Ọ bụrụ n’inweghị obi abụọ gbasara onye nweere onwe ya, ha ga-edozi ihe ọzọ.
Gbanyụọ ọrụ gị - Ozugbo ị kwadoro onye na-ere ahịa gị, ha ga-adị njikere ịmalite ọrụ ahụ ma tinye aka na otu gị. Onye njikwa gị ga-eleba anya na izu abụọ ọ bụla. Y’oburu na ihe obula n’enyeghi gi obi uto na ahia gi, ha g’akwere nke ohuru.
Enweghị ọrụ ọ bụla, enweghị ajụjụ ọnụ, enweghị isi ọwụwa… Ahịa ahịa taa. Ọrụ ndị dị na ya gụnyere ndị ahịa Amazon, ndị na-ere ahịa akara, Ndị isi ahịa ahịa, ndị na-ere ahịa ọdịnaya, ndị na-ere ahịa email, ndị na-ere ahịa na-eto eto, ndị na-ere ahịa SEO, ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ, ndị na-ere ahịa na-elekọta mmadụ, na ndị na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi ọha na eze.
Ndị ahịa ahịa Tinye dị ka onye nweere onwe ya
Ngosipụta: Ana m eji nke m Ahịa ahịa Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: ndị na-ere ahịa onwe hamarketerhirendị ahịaahia freelancersakwụ ụgwọ ọchụchọ ndị akwụ ụgwọakwụ ndị ahịa mgbasa ozi na-akwụ ụgwọkwuo ugwo n’otu ahiandị mgbasa ozi mgbasa ozindị ahịa ahịa mgbasa ozi